अर्थ – Page6– Contemporary News Portal From Nepal
लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज पनि दोहोरो अंकले घटेको छ । आइतबार ४१ अंकले घटेको बजार आज १६.६९ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार दोहोरो अंकले बजार घट्दा नेप्से परिसूचक एक हजार २८७.७४ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ३.२४ बिन्दुले घटेर २७३.५६ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका..
के हुँदैछ चीन जोड्ने प्रशारणलाइन ?
काठमाडौं, १८ फागुन । चीनको महत्वकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारणलाईन निर्माणका लागि नेपालतर्फको रुट अध्ययनको काम थालिएको छ । २०१७ मे १२ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो । समाचारमा लेखिएको छ, सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेको..
नेपालमा लगानी गर्न ओली सरकारले चीनलाई बोलायो
काठमाडौं, १७ फागुन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगतै चीनलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल सरकारले आमन्त्रण गरेको छ । कृषि, पर्यटन, उर्जा, औषधि र भौतिक पूर्वाधार लगायत प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ ओली सरकारले चीन सरकारलाई आमन्त्रण गरेको हो । नेपालमा निर्यात औद्योगिक क्षेत्र ऐन २०१६,..
जिल्ला मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ६६ करोड ३९ लाख ७८ हजार राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु एक अर्ब ८५ करोड २१ लाख २५ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । सो कार्यालयले पूँजीगत लाभकर, बागमती सुधार शुल्क, सेवा शुल्क तथा रजिष्ट्रेसन (घर जग्गा पास) शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । कार्यालयले काठमाडौँको..
लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजार आज भने उकालो लागेको छ । सोमबार सरकार विस्तार भएको र अर्थमन्त्रीका रुपमा डा युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि शेयर बजारले स्वागत गरेको धितोपत्र बजारका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार बजार आज ५.८६ बिन्दुले उकालो लागेर एक हजार ३६४ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका शेयर..
विभिन्न सहकारीमा आबद्ध जिल्लाका सहकारीकर्मीले आर्थिक विकासका लागि सहकारी महत्वपूर्ण माध्यम भएको भन्दै १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकासका लागि प्रतिबद्धता तयार पारी सार्वजनिक गरिएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघकी सञ्चालक शान्ति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहकारी..
यस्ता छन् नेपालकै अहिलेसम्मका बिद्धवान अर्थमन्त्रीको पाँच सूत्रीय प्रतिवद्धता
१४ फागुन, काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु निकै मख्ख परेर सुनिरहेका थिए । मन्त्रीले आफ्नो पाँच बुँदे प्रतिवद्धता सुनाइसकेपछि अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने ‘आमाको अगाडि मामाको के बखान गर्नू !’ अर्थतन्त्रबारे राम्रोसँग बुझेका खतिवडाका..
पाल्पामा सञ्चालित पाल्पा प्रदेशस्तरीय महोत्सवमा रु एघार करोडको कारोबार भएको छ । यही फागुन ३ देखि १३ गतेसम्म सञ्चालित उक्त महोत्सवको करिब तीन लाख नागरिकले अवलोकन गरेको पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उक्त महोत्सवमा ४६२ कक्ष राखिएको थियो । पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको मुख्य आयोजनामा..
रु पाँच करोड ७१ लाखभन्दा बढी राजश्व संकलन
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को माघ मसान्तसम्म रु पाँच करोड ७१ लाख ९५ हजार ६९६ राजश्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा रु चार करोड ९८ लाख ३० हजार २१६ राजश्व संकलन गरेको थियो । यस अवधिमा गत वर्षभन्दा रु ७३ लाख ७५ हजार ४८० बढी राजश्व संकलन भएको छ । राजश्व शाखाका अनुसार माघ मसान्तसम्म नक्सापास दस्तुरबाट रु एक करोड २८ लाख ४७..
काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकबाट महसुल असुल गर्न मात्रै करिब १५ सय कर्मचारी खटाउनुपरेको छ। विद्युत महसुल केन्द्रका मुलुकभर एक सय ६८ वटा आय संकलन केन्द्र छन्। ग्राहकको चाप हेरी एक केन्द्रमा कम्तीमा ४ देखि १५ जनासम्म कर्मचारी खटिने गरेका छन्। उनीहरुलाई दिने मासिक तलब औसतमा २५ हजार हिसाब गर्ने हो भने पनि..